Ny kinova vaovao an'ny AGL UCB 9.0, sehatra iraisan'ny rehetra ho an'ny subsystem automotive dia vonona | Avy amin'ny Linux
Ny kinova vaovao an'ny AGL UCB 9.0 dia vonona, sehatra iraisan'ny rehetra ho an'ireo zanadrafitra mandeha amin'ny fiara
Darkcrizt | | Fitsinjarana
Ny Linux Foundation nanolotra ny fanontana vaovao an'ny fizarana AGL UCB 9.0 (Base Automotive grade Linux Unified Code Base) izay novolavolaina ho sehatra iraisampirenena hampiasaina amin'ny subsystem automotive, manomboka amin'ny dashboard ka hatramin'ny rafitra infotainment automotive.
Ny fizarana mifototra amin'ny fivoaran'ny tetik'asa Tizen, GENIVI ary Yocto. Ny tontolon'ny sary dia mifototra amin'ny fivoaran'ny tetikasa Qt, Wayland, ary Weston IVI Shell.
Ireo orinasa voarohirohy amin'ny fampandrosoana an'ny tetikasa asio marika malazaToy ny Toyota, Ford, Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi ary Subaru.
1 Momba ny AGL UCB
2 Vaovao lehibe momba ny AGL UCB 9.0
3 marary mitsika
Momba ny AGL UCB
Ireo mpanamboatra fiara dia afaka mampiasa AGL UCB ho toy ny rafitra hamoronana vahaolana farany, aorian'ny fanatanterahana ireo fanovana ilaina amin'ny fitaovana sy ny fanaingoana ny interface.
Ny sehatra dia mamela anao hifantoka amin'ny fampandrosoana ny fampiharana sy ny anao manokana fomba handaminana ny asan'ny mpampiasa, tsy mila mieritreritra ny fotodrafitrasa ambany sy hampihena ny vidin'ny fikolokoloana.
Misokatra tanteraka ny tetikasa: ny singa rehetra dia misy lisansa maimaimpoana. Andiana prototypes azo ampiharina amin'ny fampiharana mahazatra voasoratra amin'ny alàlan'ny teknolojia HTML5 sy Qt no omena eo amin'ny lampihazo.
Ohatra, misy ny fampiharana ny efijery an-trano, ny tranokala fitetezana tranonkala, ny dashboard, ny rafitra fitetezana (mampiasa Google Maps), ny fifehezana ny toetrandro, ny haino aman-jery miaraka amin'ny fanohanan'ny DLNA, ny interface ho an'ny fikirakirana ny subsystem audio, programa iray hamakiana vaovao.
Ny singa momba ny fifehezana ny feo, ny fanovozana vaovao dia atolotra ihany koa, fifandraisana amin'ny finday avo lenta amin'ny alàlan'ny Bluetooth sy ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra CAN hahazoana fidirana amin'ireo sensor sy famindrana data eo anelanelan'ny valan'ny fiara.
Vaovao lehibe momba ny AGL UCB 9.0
Amin'ity fanontana vaovao ity ny fanatsarana ny fanohanana ny asan'ny tambajotra sy ny toerana misy azy, ary koa ny fahombiazan'ny fampiharana HTML5 tena nihatsara, Ho fanampin'izay, ny API ho an'ny Bluetooth dia nohavaozina ary ny fanohanan'ny pbap Bluetooth sy ny mombamomba ny sarintany dia nitarina.
Miorina amin'ny fampiharana ao amin'ny HTML5 dia nanampy fanampiana ho an'ny fidirana miorina amin'ny token izy ireo, sary iray natolotra miaraka amin'ireo rindranasa HTML5 izay mampiasa Web App Manager (WAM) sy Chromium ihany ary nanampy fampiharana HTML demo ho an'ny efijery an-trano, App Launcher, Dashboard, Configurator, Media Player, Mixer, HVAC, ary Chromium Browser.
Etsy ankilany, ny fampiharana fampiharana maharitra dia nosoratana tao amin'ny QML, toy ny ohatra amin'ny fanavaozana ny dashboard izay manohana ny fanodinana ny hafatra CAN avy amin'ny familiana sy ny bokotra multimedia, ny iray hafa dia ny fahaizana mampiasa bokotra amin'ny ny familiana hifehezana ny rafitry ny fampahalalana ho an'ny fiara.
Ankoatra izany, Fanohanana ireo fitaovana nohavaozina ho an'ny: Renesas RCar3 BSP 3.21 (M3 / H3, E3, Salvator), SanCloud BeagleBone Enhanced miaraka amin'ny fanohanana an'i Automotive Cape, i.MX6 ary Raspberry Pi 4.
Raha ny fanavaozana, nanampy fanampiana amin'ny famoahana ny fanavaozana ny OTA (Over-the-Air) ho an'ny tontolo iainana mifototra amin'ny teknolojia OSTree, ahafahanao manodinkodina ny sarin'ny rafitra iray manontolo miaraka amin'ny fahafahanao manavao ireo rakitra tsirairay ary manova ny fahasalaman'ny rafitra ankapobeny
Amin'ireo fanovana hafa miavaka amin'ity kinova vaovao ity dia:
Application Framework dia mampihatra fahazoan-dàlana miorina amin'ny token.
API nanitatra ho an'ny fankasitrahana ny kabary ary nanatsara ny fampidirina amina mpampita lahateny.
Fanampiana fanampiny ho an'ny Alexa Auto SDK 2.0.
Volana vaovao misokatra amin'ny interface screen no atolotra hitantanana ny fanekena ny fitenenana.
Ny subsystem audio dia nanatsara ny fanohanany ny mpizara haino aman-jery PipeWire ary ny mpitantana ny session WirePlumber.
Fanolorana savaranonando ny efijery vaovao sy mpitantana varavarankely aroso (ampandehanana amin'ny fisafidianana 'agl-mpamoron-kira').
Ary farany, ho an'ireo izay liana te-hanandrana ity rafitra ity dia tokony ho fantatr'izy ireo izany ny fananganana natolotra dia namboarina ho ny zana-kazo QEMU, Renesas M3, Intel Up², Raspberry Pi 3 ary Raspberry Pi 4.
Ho fanampin'ny fandraisana anjaran'ny vondrom-piarahamonina, novolavolaina ho an'ny NXP i.MX6, DragonBoard 410c, Intel Minnowboard Max (Atom E38xx), ary ny tabilaon'ny TI Vayu. Misy ny kaody loharanom-pahombiazan'ny tetikasa via Git.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ny kinova vaovao an'ny AGL UCB 9.0 dia vonona, sehatra iraisan'ny rehetra ho an'ireo zanadrafitra mandeha amin'ny fiara
Ny kinova DXVK 1.6.1 vaovao dia mahazo manamboatra bibikely sy fianjerana amin'ny lalao
BleachBit 4.0.0: kinova vaovao misy fanatsarana, fanamboarana ary fanovana